Lakka: iyo OpenELEC-yakavakirwa distro yemitambo yevhidhiyo yeRetro | Linux Vakapindwa muropa
Lakka: iyo OpenELEC-yakavakirwa distro yemitambo yeRetro
Lakka iri kugoverwa kweLinux Izvo zvechokwadi wakanzwa (pano tatozviita) atove nezvake. Iyo distro yakavakirwa pane inozivikanwa OpenELEC, yakanangana nekushandisa yakachipa uye yakavhurika Media Center, asi mune ino kesi veLakka vanogadzira vakatarisa kune retro vhidhiyo yemitambo emulators kune avo vese vanoda idzi dhijitari dzekuzvivaraidza dzakashandurwa mune zvekare. uye kuti kunyangwe yavo isina kugadzikana mifananidzo uye tekinoroji (zvichienzaniswa nemazita emazuvano) vanoramba vachida, kuvaraidza uye kusambobuda kunze kwechitaera.
Kana iwe uri mumwe weavo nostalgic uye vanoda mitambo yemavhidhiyo retro, Iye zvino unogona kushandisa Lakka kushandura komputa yako ive huru 8 uye 16 bit vhidhiyo mutambo emulator kune chero retro koni, kungave kuri paPC, laptop kana yako Raspberry Pi yakabatana nechengeti kana yako yekutandarira TV. Kutenda kwaLakka uye neiyo DIY (Zviite Iwe pachako) uzivi hwakanyanya mufashoni nhasi, unogona kugadzira koni yako nenzira yakachipa uye yakapusa yekushandisa maawa uchivaraidza.
Kunyange zvakadaro Lakka iri mukusimudzira, ikozvino unogona kurodha dzakagadzikana vhezheni dzinokutendera iwe kutevedzera kutamba mimwe mitambo yeRetro. Kana iwe uchida kuitora, unogona kuenda ku Lakka chirongwa chepamutemo webhusaiti kwaunowana rumwe ruzivo nezvazvo uye iwe unozogona kuwana akasiyana ekusiyanisa sarudzo, nekuti inowanikwa kune mamwe maSBC board, kwete chete Raspberry Pi, pamwe neWindows, Mac uye GNU / Linux.
Kana zviri zvimwe zvinhu zveLakka, ine madhiraivha ekutsigira, pakati pevamwe, vatungamiriri veiyo Sony's PS3 uye Microsoft's Xbox 360. Izvo zviri nyore kwazvo maererano nekumisikidza uye kugadzirisa, pamwe nekusaunza dambudziko rakakura kuti uishandise. Naizvozvo, haina kuunza matambudziko, inongokuunzira iwe yakawanda yevaraidzo uye kunakidzwa neyemhando yepamusoro yaunofarira zvakanyanya, ichishandura michina yako kuva vintage zororo nzvimbo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Lakka: iyo OpenELEC-yakavakirwa distro yemitambo yeRetro
Amir Torrez (@amirorrez) akadaro
Ndezvipi zvinyaradzo zvinotevedzera?
Pindura kuna Amir Torrez (@amirtorrez)
Android vs iOS: zvayakanakira nezvayakaipira
Linux 4.5.4: iyo nyowani kernel vhezheni iri kunze